Cine Nagari – “साथ साथ” को निर्माण घोषणा, को को छन् कलाकार ?
“साथ साथ” को निर्माण घोषणा, को को छन् कलाकार ?
११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०४:१६cineadminFeature, Movie, Nepali Movie0
चलचित्र “साथ साथ” को निर्माण घोषणा भएको छ । चलचित्रको यहि फागुनको दोस्रो साताबाट छायांकन सुरु हुनेछ । रेशा श्रेष्ठको लगानीमा निर्माण हुने फिल्ममा शुशील पोख्रेल, रेशा श्रेष्ठ, किरण थापा, भेषराज खत्रीलगायतको अभिनय रहनेछ ।
चलचित्र “साथ–साथ” बाट नव नायक आशिष अर्यालले डेब्यू गर्दैछन् । श्री तिमल्सिना फिल्म प्रोडक्शनको ब्यानरमा बन्ने चलचित्रको कथा कलाकार शुशील पोख्रेलले लेखेका हुन् । चलचित्रलाई वर्ष २०७५ माघ १ गते रिलिजको तयारी गरिएको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ ।
चलचित्रमा शिव ढकालको छायांकन, अनिल कुमार महर्जनको सम्पादन, रुपेश बाँस्कोटाको संगीत, एन.वी महर्जनको द्वन्द्व र रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन रहने छ । फिल्म लभस्टोरी जनरामा निर्माण हुनेछ । चलचित्रलाई सुमन घिमिरेले निर्देशन गर्दैछन् ।